Quraanka & Taariikhda: Ciise al Masix miyuu ku dhintay iskutallaabta? - Injiilka oo ku qoran af-soomaali
Su’aashan waxaan si faahfaahsan u baarnay, annagoo adeegsanayna dhagar-madoobaadkii Kacbada (318-kii Hijriyada) laga waayay, si aan arrintan u muujinno.
Kuwa inkira in Ciise al-Masix NNKH uu ku dhintay iskutallaabta dusheeda inta badan waxay tixraacaan Ayah An-Nisa 157.
Suuradda An-Nisaa 4:157
Ciise al Masix ma la dilay ?
Ogow tani ma odhanayso Ciise al Masix ma dhiman. Waxay leedahay Yuhuuddu ‘ma dilin isaga…’ taas oo ka duwan. Injiilku waxa uu qoray in Yuhuuddii xidhay Nebiga, iyo Kayafas oo ahaa wadaadkii sare oo su’aalo weydiinaya laakiin
Haddaba Ciise ayay ka kaxeeyeen Kayafas ilaa guriga taliyaha. Waxay ahayd aroortii hore, oo iyagu ma ay gelin guriga taliyaha si aanay u nijaasoobin, laakiinse inay cashadii Iidda Kormaridda wax ka cunaan.
Bilaatos wuxuu ahaa taliyihii Roomaanka. Iyaga oo ku hoos jiray gumaysigii Roomaanka, Yuhuuddu ma ay lahayn amar ay ku dilaan. Bilaatos dabadeed nebigii wuxuu siiyey askartiisii ​​Roomaanka.
Markaasuu haddaba u dhiibay in iskutallaabta lagu qodbo.
Markaa dawladdii Roomaanka iyo askartii Roomaanku waxay ahaayeen kuwii iskutallaabta ku qodbay – ma aha Yuhuudda. Eedadii xertii nebigu u soo jeedisey hoggaamiyayaashii Yuhuuddu waa taas
Ilaaha Ibraahim iyo Isxaaq iyo Yacquub, oo ahaa Ilaaha awowayaasheen, wuxuu ammaanay Midiidinkiisii Ciise, kii aad gacangeliseen oo aad Bilaatos hortiisa ku diideen markuu goostay inuu sii daayo.
Falalka 3: 13
Yuhuuddu waxay u dhiibeen Roomaanka oo ay iskutallaabta ku qodbeen. Oo markuu iskutallaabta dusheeda ku dul dhintay, meydkiisa waxaa la geliyey xabaal
Meeshii isaga iskutallaabta lagu qodbay waxaa ku tiil beer, beerta dhexdeedana waxaa ku tiil xabaal cusub oo aan ninna weli la dhigin. 42 Haddaba Maalintii Diyaargarayska oo Yuhuudda aawadeed ayay meeshaas Ciise u dhigeen, waayo, xabaashii waa dhowayd..
An-Nisa 157 ayaa sheegaysa in Yuhuuddu aysan iskutallaabta ku qodbin Ciise Masiix. Taasi waa sax. Roomaanku way sameeyeen.
Suurada Maryam iyo Geeridii Nabiga
Suuradda Maryama waxay caddaynaysaa in Ciise Masiix dhintay iyo in kale.
nabadgalyana ha ahaato korkayga maalintii lay dhalay iyo maalintaan dhiman iyo maalinta laysoo bixin anoo nool kaasi waa Ciise ibnu maryama waana hadalka xaqa ah ee ay shakin.
Suuradda Maryam 19:33-34
Tani waxay si cad u sheegaysaa in Ciise al Masix uu saadaaliyay oo uu ka hadlay dhimashadiisa soo socota, sida Injiilku qorayo .
Halkee’Yuudas lagu dilay’ Aragtida
Laakiin waxaa jirta aragti baahsan oo ah in Yuudas loo beddelay inuu u ekaado Ciise al Masix. Dabadeed Yuhuuddu waxay xidheen Yuudas (oo hadda u ekaa Ciisaha), Roomaanku waxay iskutallaabta ku qodbeen Yuudas (oo weli u eg Ciise), ugu dambayntiina Yuudas waa la aasay (ilaa haddana u ekaa Ciisaha). Aragtidan Ciise Masiix wuxuu si toos ah u galay jannada isagoon dhiman. In kasta oo Quraanka iyo Injiilka midkoodna aanu ku sifeynin qorshahan la faahfaahiyey, haddana si weyn baa loo dhiirrigeliyey. Haddaba aan baaro aragtidan.
Ciise al Masix ee diiwaanka taariikhda
Taariikhda cilmaanigu waxay diiwaangelisay tixraacyo dhowr ah oo ku saabsan Ciise al Masix iyo dhimashadiisa. Bal aan eegno laba. Taariikhyahankii Roomaanka ee Tacitus wuxuu tixraacay Ciise Masiix markii uu duubayay sidii Imbaraadoorkii Roomaanka Nero uu u silcin jiray raacayaashii ugu horreeyay ee nebiga AD 65. Tacitus wuxuu qoray:
Waxaa lagu ciqaabay jirdilkii ugu wacnaa, dadka inta badan loogu yeero Masiixiyiinta, kuwaas oo lagu nacay xad-dhaafkooda. Masiixa, aasaasihii magaca, waxaa dilay Bontiyos Bilaatos, taliyihii Yahuudiya ee boqortooyadii Tiberiyos; Laakiin rumaysadkii wasakhda lahaa oo wakhti dheer la cidhiidhiyey ayaa mar kale ka soo dhex kacay Yahuudiya oo belaayadu ka timid, laakiin sidoo kale magaalada Rooma.
Tacitus Annals XV. 44
Tacitus wuxuu xaqiijinayaa in Ciise Masiix uu ahaa:
1) qof taariikhi ah;
2) waxaa dilay Bontiyos Bilaatos;
3) xertiisii ​​waxay bilaabeen dhaqdhaqaaqooda Yahuudiya (Jerusalem) dhimashadii nebi Ciise Masiix ka dib,
4) 65 AD (waqtigii Nero) waxay ka soo fideen Yahuudiya ilaa Rooma si uu boqorkii Rooma u dareemay inuu joojinayo.
Josephus waxa uu ahaa hogaamiye ciidan oo Yuhuudi ah/taariikh yahan wax ka qoraya taariikhda Yuhuuda qarnigii kowaad. Isaga oo sidaas yeelaya waxa uu noloshii Ciise Masiix ku daboolay kelmadahan:
“Wakhtigan waxaa jiray nin xigmad leh … Ciise. … wanaagsan, iyo … wanaagsan. Oo dad badan oo Yuhuud iyo quruumo kale ah ayaa xertiisii ​​noqday. Bilaatos wuxuu xukumay in iskutallaabta lagu qodbo oo uu dhinto. Kuwii xertiisii ​​noqday kama ay tegin xertiisii. Waxay u sheegeen inuu u muuqday saddex maalmood ka dib markii iskutallaabta lagu qodbay oo uu nool yahay.
Yuusuf. 90 AD Antiquities xviii. 33
Josephus wuxuu xaqiijinayaa in:
1) Ciise Masiix wuu jiray.
2) Wuxuu ahaa macalin diineed.
3. Bilaatos oo ahaa taliyihii Roomaanka ayaa dilay.
4) Xertiisii ​​waxay si cad ugu dhawaaqeen sarakicidda Ciise Masiix isla markiiba.
Waxay u muuqataa in diiwaannadan taariikhiga ah in dhimashadii nebigu ay ahayd dhacdo caan ah oo aan muran lahayn, iyada oo sarakicistiisii ​​​​uu dunida Roomaanku uga dhawaaqay xertiisii.
Sooyaal Taariikheed – oo ka yimid Baybalka
Waa kan sida kitaabka Falimaha Rasuullada ee Baybalku u qorayo wixii dhacay markii xertii ay Yeruusaalem kaga dhawaaqeen sarakicidda Ciise al Masix ee macbudka, dhawr toddobaad ka dib markii iskutallaabta lagu qodbay.
Intay dadkii la hadlayeen ayaa wadaaddadii iyo sirkaalkii macbudka iyo Sadukiintii u yimaadeen, 2 iyagoo ka xumaaday, maxaa yeelay, waxay dadkii bareen oo Ciise ku ogeysiiyeen sarakicidda kuwii dhintay. 3 Markaasay qabqabteen oo xabbiseen ilaa maalintii ku xigtay, maxaa yeelay, durba fiidkii bay ahayd. 4 Laakiin qaar badan oo hadalkii maqlay waa rumaysteen; oo tiradii nimanku waxay noqotay abbaaraha shan kun.
5 Markaasaa waxaa dhacday in maalintii dambe taliyayaashoodii iyo waayeelladoodii iyo culimmadoodii ay Yeruusaalem isugu soo wada urureen; 6 waxaana joogay Annas oo ahaa wadaadkii sare, iyo Kayafas, iyo Yooxanaa, iyo Aleksanderos, iyo in alla intii wadaadka sare xigaalo la ahayd. 7 Oo intay dhexda soo taageen bay weyddiiyeen oo ku yidhaahdeen, Xooggee ama magacee baad waxan ku samayseen? 8 Markaasaa Butros oo Ruuxa Quduuska ahi ka buuxo wuxuu iyaga ku yidhi, Kuwiinnan dadka u taliya iyo waayeelladow, 9 haddii maanta naloo imtixaamayo falimihii wanaagsanaa oo loo sameeyey nin xoogdaran iyo sidii ninkan loo bogsiiyey, 10 dhammaantiin ogaada, idinka iyo dadka reer binu Israa’iil oo dhammu, in magaca Ciise Masiix, kii reer Naasared, oo aad iskutallaabta ku qodobteen, oo Ilaah ka sara kiciyey kuwii dhintay, daraaddiis ninkanu isagoo bogsaday halkan hortiinna ah ku taagan yahay. 11 Isagu waa dhagixii idinkoo wax dhisa aad diiddeen, oo noqday madaxa rukunka. 12 Mid kale badbaadada lagama helo, maxaa yeelay, ma jiro magac kale samada hoosteeda oo dadka dhexdooda loo bixiyey oo waajib inoo ah inaynu ku badbaadno.
13 Markay arkeen Butros iyo Yooxanaa dhiirranaantoodii, oo ay garteen inay yihiin niman aan wax baran, jaahiliinna ah, ayay yaabeen; markaasay garteen inay Ciise la joogi jireen. 14 Markay arkeen ninkii la bogsiiyey oo la taagan iyaga, waxba way ka odhan kari waayeen. 15 Laakiin intay amreen inay shirka dibadda uga baxaan, ayay wada hadleen iyagoo leh, 16 Maxaynu nimankan ku samaynaa? Waayo, inay calaamo caan ah faleen waa u muuqataa kuwa Yeruusaalem jooga oo dhan; mana dafiri karno. 17 Laakiin si ayan dadka ugu sii faafin, aynu cabsiinno si ayan hadda ka dib magacan ninna ugula hadlin.
Falalka 4: 1-17
17 Laakiin waxaa kacay wadaadkii sare iyo kuwii la socday oo dhan, kuwaas oo ka mid ahaa dariiqada Sadukiinta; markaasay iyagoo aad u xanaaqsan, 18 intay rasuulladii qabqabteen, xabsi ku rideen. 19 Laakiin malaa’igtii Rabbiga ayaa habeennimo albaabbadii xabsiga ka furtay, oo intay dibadda u soo saartay, ku tidhi, 20 Taga oo macbudka isdhex taaga, oo waxaad dadka kula hadashaan erayada oo dhan ee Noloshan. 21 Markay taas maqleen ayay, intay aroortii macbudkii galeen, dadkii wax bareen. Laakiin wadaadkii sare iyo kuwii la jiray ayaa yimid, oo waxay isugu yeedheen shirkii iyo duqowdii reer binu Israa’iil oo dhan, markaasay cid u direen xabsigii in kuwii xidhnaa laga keeno. 22 Laakiin saraakiishu markay xabsiga yimaadeen waa ka waayeen iyagii; markaasay shirkii ku noqdeen oo u warrameen, 23 oo waxay ku yidhaahdeen, Waxaannu aragnay xabsigii oo aad u xidhan, oo nimankii ilaalinayayna albaabbada ka taagan yihiin; laakiin markaannu furnay, ninna waa ka waynay. 24 Haddaba markii sirkaalkii macbudka iyo wadaaddadii sare hadalladaas maqleen, waxay la fajaceen waxyaalahaasu waxay noqon doonaan. 25 Mid baa intuu u yimid ku yidhi, Ogaada, nimankii aad xabsiga ku riddeen, macbudkay dhex taagan yihiin, oo dadkay wax ku barayaane. 26 Markaasaa sirkaalkii, isagoo saraakiil kale la socoto, intuu tegey, rabshadla’aan u soo kaxeeyey; waayo, waxay ka baqeen dadku inuu dhagxiyo.
27 Markaasay, intay soo kaxeeyeen, shirka soo hor taageen. Kolkaasaa wadaadkii sare weyddiiyey, 28 oo yidhi, Waxaannu aad idiinku amarnay inaydnaan magacan wax ku barin; laakiin bal eega, waxaad Yeruusaalem ka buuxiseen waxbariddiinnii, oo weliba waxaad damacsan tihiin inaad ninkan dhiiggiisii dusha naga saartaan. 29 Laakiin Butros iyo rasuulladii ayaa u jawaabay oo ku yidhi, Waa inaannu Ilaah addeecno intaannu dad addeeci lahayn. 30 Ilaahii awowayaashayo ayaa soo sara kiciyey Ciisihii aad geedka ku deldesheen oo disheen. 31 Ilaah baa isaga gacantiisa midigeed sare ugu qaaday inuu ahaado Amiir iyo Badbaadiye si uu Israa’iil toobad iyo dembidhaaf u siiyo. 32 Waxyaalahaas annagaa ka marag ah, waxaa kaloona ka marag ah Ruuxa Quduuska ah oo Ilaah siiyey kuwa addeeca isaga.
33 Laakiin markay taas maqleen, way ka xanaaqeen, oo waxay ku tashadeen inay laayaan. 34 Laakiin waxaa shirkii iska dhex taagay mid Farrisiinta ka mid ahaa oo la odhan jiray Gamalii’eel, kaas oo ahaa macallinkii sharciga, dadkuna aad u maamuusi jireen, oo wuxuu amray in nimanka dibadda cabbaar loo saaro. 35 Markaasuu iyagii ku yidhi, Niman yahow reer binu Israa’iil, iska jira waxaad la damacsan tihiin inaad nimankaas ku samaysaan. 36 Maxaa yeelay, hadda ka hor waxaa kacay Tudas, isagoo nin weyn iska dhigaya, kaasoo niman badan oo qiyaas afar boqol gaadhaa raaceen. Isagii waa la dilay, oo intii addeecday oo dhammuna way kala firdheen, oo waxay noqdeen wax aan waxba ahayn. 37 Ninkaas dabadiis, waagii dadka la qori jiray, waxaa kacay Yuudas kii reer Galili, oo dad buu duufsaday; isaguna waa dhintay, oo intii addeecday oo dhammuna way kala firdheen. 38 Haddaba waxaan idinku leeyahay, Nimankan faraha ka qaada oo iska daaya; waayo, taladan ama shuqulkanu hadday dad ka yimaadeen, waa baabbi’i doonaan; 39 laakiin hadday Ilaah ka yimaadeen, ma baabbi’in kari doontaan; haddii kale malaha waxaa la ogaan doonaa inaad Ilaah la diriraysaan.
40 Markaasay ku raaceen isaga; oo intay rasuulladii u yeedheen, ayay garaaceen, oo waxay ku amreen inayan magaca Ciise ku hadlin, markaasay sii daayeen. 41 Markaasay shirkii hortiisii ka tageen, iyagoo ku faraxsan in lagu tiriyey inay istaahilaan in Magaca aawadiis loo maamuus jebiyo.
Falalka 5: 17-41
Bal u fiirso sida hoggaamiyeyaasha Yuhuuddu ay ugu dadaaleen inay joojiyaan farriintooda. Sida dawladaha maanta oo ka baqaya dhaqdhaqaaqyo cusub ayay xidh-xidheen, u hanjabeen, garaaceen ka dibna ay dileen (qaar) xer ah si ay isku dayaan inay joojiyaan. Xertani waxay farriintooda kaga dhawaaqeen Yeruusaalem – isla magaaladaas oo dhawr toddobaad ka hor si cad loo toogtay oo lagu aasay qof muuqaalkiisu yahay Ciise Masiix. Balse yaa la toogtay? Nabiga? Mise Yuudas baa isaga u ekaa?
Aynu eegno beddelka oo aragno waxa macno samaynaya.
Meydka Ciise Masiix iyo qabriga
Waxaa jira laba ikhtiyaar oo kaliya oo ku saabsan qabriga. Ama qabrigu waa madhan ama waxa ku jira jidh u eg nabiga. Ma jiraan doorashooyin kale.
Aynu ka soo qaadno aragtida ah in Yuudas loo ekaysiiyay nebiga, in la iskutallaabta lagu qodbay meeshii isaga, ka dibna maydkiisii ​​(nabiga oo kale) la dhigay xabaasha. Bal hadda ka fikir dhacdooyinka soo socda ee aan ognahay inay dhaceen taariikhda. Josephus, Tacitus iyo Falimaha Rasuullada dhamaantood waxay noo sheegeen in xertii farriimaha ay ka bilaabeen Yeruusaalem iyo maamulkii halkaas joogay waxay qaadeen tallaabo adag oo ay kaga soo horjeedaan farriinta xerta wax yar ka dib markii iskutallaabta lagu qodbay (Yudas oo u ekaa nebiga – maadaama aan ka qaadaneyno aragtidan). . Laakiin aragtidani waxay aqbashay in Yuudas dhintay. Aragtidan, jidhku wuxuu ku hadhay xabaashii (laakin weli wuu isu beddelay inuu u ekaado nebiga). Xertii, dawladda, Tacitus,
Tani waxay dhalinaysaa su’aal. Waa maxay sababta hoggaamiyeyaasha Roomaanka iyo Yuhuudda ee Yeruusaalem ku nool ay u qaadi lahaayeen tillaabooyin adag si ay u joojiyaan sheekooyinka sarakicidda haddii jidhkani weli ku jiro xabaashii, oo ay weheliso farriimaha dadweynaha ee xertii ka soo sarakicidda nebigii dhintay? Haddii maydka Yuudas (oo u eg Ciise Masiix) uu weli xabaasha ku jiro, waxay noqon lahayd arrin fudud in maamulku qof walba tuso jidhkan oo uu sidaas ku beeniyo xertii (kuwaas oo sheegay inuu soo sara kacay) iyada oo aan la xidhin. jirdil ugu dambayntiina u shahiiday. Sababta ay sidaas u yeeli waayeen waxay ahayd sababtoo ah ma jirin jidh la tuso – xabaashii way madhnayd.
Dhagaxa Madow, Kacbada iyo Masaajidada Maka iyo Madiina oo tusaale ahaan ah
Sanadkii 930 miilaadiyada (318 Hijriyada) ayaa waxaa xaday dhagxaan madoobaad ( al-Xajaru al-Aswad ) oo laga saaray Kacbada magaalada Makka koox shiico ah oo ka soo horjeeday saldanada Cabaasiyiinta ee xiligaas. Waxa la qabtay 23 sano ka hor inta aan lagu soo celin Kacbada. Dhagaxa Madow waa la waayayaa.
Bal qiyaas xaalad sidaas oo kale ah oo koox si fagaare ah ugu wacdisay dadkii isugu soo baxay Masjidka weyn ee Maka ( al-Masjid al-Xaram ) in Dhagaxa Madow uusan hadda ku yaalo geeska Bari ee Kacbada. Farriintoodu waa mid lagu qanci karo in xujayda Masjidka ku sugan ay bilaabaan inay rumaystaan ​​in Dhagaxa Madow uu meesha ka baxay. Sidee bay u ilaalin karaan labada masjid ee xurmada leh ( Kādim al-Haramayn aš-Šarīfayn)) la dagaallama fariinta noocaas ah? Hadii ay fariintaasi been tahay oo dhagxaan madoow uu wali Kacbada yaalo sida ugu haboon ee ay Mas’uuliyiinta u joojin karaan fariintaasi waxa ay noqonaysaa in si cad loo tuso in dhagaxa madoow uu wali Kacbada yaalo sidii uu qarniyo badan ku jiray. Markaa fikraddan isla markiiba waa la aamini doonaa. U dhowaanshaha Dhagaxa Madow ee Masjidka Maka ayaa taasi suurtogal ka dhigaysa. Taa beddelkeeda, haddii Mas’uuliyiintu aanay tusin Dhagax-madow si ay u beeniyaan fikraddan, markaas show-gani runtii wuu lumay sidii 318-kii Hijriyada.
Si kastaba ha ahaatee, haddii kooxdani ay ku sugan yihiin Masjidka Nebiga ee Madiina ( Al-Masjid An-Nabawī ) oo ku dhawaaqaya in Dhagaxa Madow laga saaray Kacbada Maka oo u jirta 450 km, markaa way ku adag tahay Mas’uuliyiinta Labada Xaramka. Masaajidada si ay u beeniyaan sheekadooda mar haddii ay adag tahay in dadka Madiina la tuso dhagaxa madow ee aad u fog.
U dhowaanshaha shay muqadas ah ee lagu muransan yahay waxa ay sahlaysaa in la beeniyo ama la xaqiijiyo sheegashada ku saabsan maadaama ay u dhowdahay in la baaro.
Hogaamiyaasha Yuhuuda ee ka soo horjeeday fariinta sarakicidda kuma ay beenin jidh
Mabda’ani wuxuu quseeyaa jirka Yuudas/Ciise ee Yeruusaalem. Qabrigii uu yaalay maydka Yuudas (oo u eg Ciise) waxa ay dhawr mitir u jirtay macbadka halkaas oo xertii Ciise Masiix ay dadka ugu qaylinayeen in nebigu kuwii dhintay ka soo sara kacay. Waxay ahayd inay u fududaato hoggaamiyeyaasha Yuhuudda inay ceebeeyaan farriintooda sarakicidda iyagoo si fudud u tusaya jidhka (u eg Ciise) ee xabaasha ku jira. Waxaa xaqiiqo ah in farriinta sarakicidda (kaas oo aan la caddayn in jidhku weli xabaasha ku jiro) uu ka bilaabmay xabaashii agteeda, halkaas oo caddaynta qof kastaa arki karo. Mar haddii hoggaamiyayaashii Yuhuuddu aanay warkooda beenin iyagoo jidh tusay, ma jiro jidh la tuso.
Kumanaan ayaa rumaystay farriinta sarakicidda ee Yeruusaalem
Kumanaan ayaa loo beddelay si ay u rumaystaan ​​sarakicidda jidheed ee Ciise Masiix ee Yeruusaalem wakhtigan. Haddaad ka mid ahayd dadkii badnaa ee dhegaysanayay Butros, oo aad la yaabban lahayd in farriintiisu run tahay, miyaydaan ugu yaraan qaadan nasasho qado ah si aad xabaasha u tagto oo aad isu eegto si aad u ogaato inuu weli jiro meyd. halkaas? Haddii maydka Yuudas (oo u eg nebi Ciise Masiix) uu weli xabaasha ku jiray ninna ma rumaysteen farriintii rasuulladii. Laakin taariikhdu waxa ay qortaa in ay kasbadeen kumanaan taageerayaal ah oo ka bilaabmay Yeruusaalem. Taasi waxay noqon lahayd wax aan macquul ahayn jidh u eg kii nebiga oo weli Yeruusaalem ku yaal. Jidhka Yuudas oo ku hadhay xabaashii waxay horseedaysaa wax aan macquul ahayn. Wax macno ah ma samaynayso.
Aragtida jireed ee Yuudas ma sharxi karto qabriga madhan.
Dhibaatada ka jirta aragtidan Yuudas oo loo beddelay inuu u ekaado Ciise Masiix ka dibna lagu qodbay oo lagu aasay meeshiisii, waxay tahay inay ku dhammaato qabri la haysto. Laakiin xabaashii madhan ayaa ah sharraxaadda kaliya ee xertu awood u leedahay inay bilaabaan, toddobaadyo uun ka dib Bentakoste , dhaqdhaqaaq ku salaysan sarakicidda nebiga ee isla magaaladaas fulinta.
Waxa jiray laba dookh oo keliya, mid Yuudas jidhkiisu u ekaaday sidii nebigii ku hadhay xabaasha, iyo sarakicidda Ciise Masiix oo qabri madhan wata. Maaddaama jidhka ku haray xabaasha uu keeno wax aan macquul ahayn, markaa Ciise Masiix waa inuu ku dhintay gacmaha Roomaanka oo uu ka soo sara kacay xabaashii sida si cad loo sheegay, isagoo na siinaya hadiyaddiisa nolosha .
Isaga oo su’aashan sii baadhaya, cilmi-baare Cumming waxa uu dib u eegis ku eegayaa tafsiirrada suugaanta Sunniga ee culimada iyo culimada.
Tags:An-nisa 4:157ciise wuxuu ku dhintay iskutallaabtadhagaxa madow iyo kaaba iyo isa al Masihma Yuudas ama ciise ayaa dhintaymaryam 19:33Yuudas bedelay Ciise